မြန်မာသံရုံး၊ ဗန်ကောက်မြို့က ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ (၇၂) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ – Ministry of Foreign Affairs
မြန်မာသံရုံး၊ ဗန်ကောက်မြို့က ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ (၇၂) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
(၁၃-၁-၂၀၂၀ ရက်၊ ဗန်ကောက်မြို့)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ (၇၂)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်၊ ၁၈၃၀နာရီမှ ၂၀၃၀နာရီအထိ ဗန်ကောက်မြို့ ၊ The Athene Hotel တွင်ကျင်းပခဲ့ရာ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်သန်းမှ ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက် အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်သီချင်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များ ကျန်းမာစေရန် အပြန်အလှန်ဆုတောင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားသို့ Guest of Honour များအဖြစ် Privy Councill၀r H.E. Mr. Chirayu Isarangkun Na Ayuthaya ၊ ထိုင်းလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဌ H.E. Mr. Suchart Tonjaroen ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr.Vijavat Isarabhakdi တို့ အပါအဝင် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အရာရှိကြီးများ၊ ဗန်ကောက်မြို အခြေစိုက် သံရုံး၊ အဖွဲ့ရုံးများမှ သံရုံးအကြီးအကဲများနှင့် သံတမန်များ၊ ကုလသမဂ္ဂ လက်အောက်ခံအဖွဲ့ အစည်းများမှ အကြီးအကဲများ၊ စစ်သံမှုးများ၊ ထိုင်းအစိုးရ စစ်ဘက်/နယ်ဘက်မှ အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာနှင့် ထိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ မြန်မာမိတ်ဆွေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပညာတော်သင် ကျောင်းသား/သူများနှင့် ဖိတ်ကြားထားသူများ စုစုပေါင်း ဧည့်ပရိသတ် (၄၀၀)ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အခမ်အနားတွင် ကြွရောက်လာကြသောဧည့်သည်များအား ဟိုတယ်အစားအသောက်များအပြင် မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအသောက်များ ဖြစ်သည့် ထောပတ်ထမင်း၊ ကြက်သားဟင်း၊ ဘာလချောင်ကြော်၊ ဆနွင်းမကင်း၊ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ၊ ကျောက်ကျောတို့ဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပြီး မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုအကများဖြင့်လည်း ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။